Basesitokisini abesifazane 'abadlwengula' umfundisi | News24
Basesitokisini abesifazane 'abadlwengula' umfundisi
Bulawayo - Kuboshwe abantu besifazane abathathu edolobheni lesibili laseZimbabwe, iBulawayo, ngezinsolo zokuvalela umfundisi endlini base beyamdlwengula, kusho umbiko wabezindaba.
Ngokusho kwephephandaba loMbuso iChronicle, uSandra Ncube, 21, uRiamuhetsi Mlauzi, 23, noMongiwe Mpofu,25, bavalela badlwengula umfundisi - igama lakhe elingaziwa - ngemuva kokuba efike emzini woyedwa wabo oseCowdray park eyolanda imali yakhe ayemboleke yona.
OLUNYE UDABA:Bagwetshwe kanzima abesifazane abadlwengula owesilisa eKZN
Umshushisi uPetros Shoko, uthe lo mfundisi wathi efika kulo muzi wathintwa isitho sakhe sangasese ngaphambi kokuba abasolwa abababili bambambe ngenkani bambeke embhedeni bamphoqe ukuba azibandakanye nomsolwa wesithathu ocansini.
"UNcube wazitika nesisulu ngocansi kanye ngaphandle kwemvume yaso," kusho uShoko.
Abasolwa baziphikile izinsolo zokudlwengula lo mfundisi kodwa bavuma "elokumwotawota".
Abasolwa bagcinwe esitokisini kanti bazobuyela enkantolo ngomhlaka-7 Agasti.
Lokhu kuza ngemuva kombiko weDaily Mail wangoLwesibili othi uthisha oneminyaka engu-39 ubudala ungeniswe esibhedlela ngemuva kokubika ukuthi udlwengulwe abesifazane abathathu abamthumba, bamgxisha izidakamizwa base beyamdlwengula izinsuku ezimbili.